Uludağရှိနှင်းများကိုခံစားပါ - RayHaber
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး16 Bursauludağdaဝမ်းဗိုက် Dragos ခံစားကြည့်ပါ
14 / 01 / 2015 Levent Ozen 16 Bursa, အထွေထွေ, Marmara ဒေသကြီး, TELPHER အပြည့်အဝဝမ်းမှခံစားရန် Remove uludağda yorumlar kapalı
အပြည့်အဝပေးရန်uludağdaအမြတ်ခံစားကြည့်ပါ: အချို့သောဖျော်ဖြေရေးပေမယ့်ကြောင်းဆီးနှင်းအစ္စတန်ဘူလ်ပေးနေတာနဲ့တူမြို့ကြီးတွေမှာဆီးနှင်းကိုဆိုလိုသည်ကိုဆိုလိုသည်လျှင်။ ဆောင်းတွင်းလအတွင်းအဖြစ်ကောင်းစွာမြို့စိတ်ဖိစီးမှုပစ်နှင့်အပြည့်အဝပေးရန်ဝမ်းဗိုက်အဆီဖယ်ရှားလိုတဲ့သူတွေကိုအဘယ်မှာရှိအဖြူနှင့်အစိမ်း Uludag အရပျမြားအတှကျလိပ်စာခံစား။
Uludag ရဲ့လူကြိုက်များနှစ်ပေါင်းများစွာရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခရီးသွားလုပ်ငန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ခဲ့ကြကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်, ဖျော်ဖြေရေးစိတ်ထဲမှကြွလာကိုပထမဦးဆုံးသောအရပ်နှင့်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းအသက်အရွယ်အပေါင်းတို့နှင့်ပရိတ်သတ်များ Uludag ဖို့တောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အယူအဆနှင့်အတူဧည့်သည်များသဘောကျတာ, နှစ်ဦးစလုံးအမြင်များ, သင်အမှန်တကယ်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအားကစားများအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုအသုံးအနှုန်းများအတွက်စံပြ entertaining အချိန်ဖြုန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ငါတို့အဘို့အအစ္စတန်ဘူလ်, ဆီးနှင်းမကြာခဏပေးနေတာတှငျနထေိုငျသူတစ်ဦးဦးအဖြစ်, ထို့နောက်အသွားအလာသော့ခတ်။ ကျနော်တို့အစ္စတန်ဘူလ်ပြည်၌သူစိမ်းမဟုတ်, ငါ Uludag ၌မိုဃ်းပွင့မြင်နေပြီးနောက်သူ၏ဇနီးမမြင်နိုင်ခဲ့ဘူးယုံကြည်သွားတယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်ကနေ Uludag သွားဖို့နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ သငျသညျပထမဦးစွာပြောပါဆိုပါကကျွန်မသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသငျသညျအဘို့ဖြစ်၏ဘတ်စ်ကားန်းကျင်စောင့်ကြည့်ဖို့စောင့်ကြည့်ဖို့သွား၏။ သင့်ရဲ့ဒုတိယ option ကို hydrofoil ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်ငါ့ကိုကဲ့သို့သင်တို့အ garanticise ကြိုတင်ဘွတ်ကင်ထားသောဟိုတယ်များ၏ယိုစီးဆင်းသွားချင်ကြဘူးလျှင်, သင်ကတည်းကဘတ်စ်ကားသုံးစွဲဖို့လိုလားကြပါတယ်။ ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအခြေအနေများကြောင့်အချိန်တစ်ခါတစ်ရံတစ်ခုလုံးကိုနေ့အဘို့ဖျက်သိမ်းနိုင်ပါတယ်လို့ပဲ။ အဘယ်သူမျှမ, သင်တို့ကိုငါသူ, ပင်လယ်လေထဲတွင်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်အစီအစဉ် B ကမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုပွငျဆငျလိမ့်မယ်မယ့်အပြင်းအထန်တောင်းဆို။ လိုလားသူစကားပြောပြီးနောက်ချက်ချင်း, Uludag ကနေအစ္စတန်ဘူလ်မရှိတိုက်ရိုက်ဘတ်စ်ကားကြောင်းဘတ်စ်ကားမှတ်သားသင့်တယ်။ ပထမဦးဆုံးအသငျသညျအချင်းချင်းဘတ်စ်ကားနှင့်အတူ Bursa, အစ္စတန်ဘူလ်နှင့် Bursa သှားဖို့လိုအပျအကြောင်းကို4နာရီကြာပါတယ်။ သငျသညျသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Uludag များအတွက်ဘတ်စ်ကား terminal ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌မြို့လယ်မှဘတ်စ်ကားယူနိုင်ပါတယ်။ နောက်တဖန် Uludag နှစ်ခုအခြားနည်းလမ်းမြို့လယ်မှာရှိတဲ့ရောက်ရှိလာပြီးနောက်ကဆိုသည်။ Uludag သင် cable ကိုကားတစ်စီးစီးကိုရှေးခယျြဖွစျစေတမြို့အလယ်ဗဟိုကနေအပြင်ထွက်ဝန်ဆောင်မှုမော်တော်ယာဉ်များကိုညွှန်ကြားချင်လျှင်။ နှစ်ဦးစလုံးနည်းလမ်းများခဏတာများမှာ, ငါသည်သင်အထက်မှမြင်ချင်ကြောင်း Uludag ရဲ့ဝိဇ္ဇာအတတ်အားလေထုရန်ကေဘယ်လ်ကားနှစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုအကြံပြုလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကေဘယ်လ်ကြိုးကားကို£ 15 ကုန်ကျသည်။ အဆိုပါလမ်းအကြောင်းကို 25 မိနစ်ကြာပါတယ်။ နှင့်မိုးသည်းထန်စွာနှင်းနှင့်အတူမြူဆိုင်းရက်ပေါင်းဤဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ငါအာမခံဖြစ်ကြောင်းကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ငါပြန်လမ်းကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။ သငျသညျဆိုးရွားစွာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအကျိုးသက်ရောက်စေမယ့်တောင်ကြီးတောင်ငယ် Uludag တက်ပြီးပေမယ့်နှင်းနှင့်မြူပြင်းထန်လာယာဉ်နှင့်အတူဝန်ဆောင်မှုမော်တော်ယာဉ်အတွက်သာမန်အခြေအနေများအောက်တွင် 12 45 မိနစ်စမ်းကြည့်ပါရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ငါတို့သည်လည်းနည်းနည်းပျင်းစရာကောင်းရှိနိုင်ပါသည်ချည်နှောင်နည်းလမ်းတွေချပြီးမပါဘဲထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဖို့ကြိုးစားနေတစ်ဦးသတိလစ် drivers တွေကို add ပါ။ ငါတို့သည်လည်းသစ်ပင်များဖျက်ဆီးခံရခြင်းနှင့်လမ်းပိတ်ပါပြီ။ တစ်ဦးစွန့်စားခရီးသငျသညျကိုနားလညျစောငျ့မြျှော။ ကျနော်တို့ထိပ်ဆုံး 1.5 နာရီရောက်ရှိနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ခရီးနည်းနည်းနှစ်များတွင်တင်းကျပ်တဲ့နှင့်တကွလူအပေါင်းတို့မောပန်းခြင်းအတွက်မြင်ကွင်းများကိုမြင်လျှင်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသွားဖြစ်တယ်ဆိုရင်။ တောင်တန်းဆီးနှင်းများနှင့်ဆီးနှင်းဖုံးထင်းရှူးပင်တပင်၏3မီတာပါဝင်သည်ဟုအဆိုပါမြင်ကွင်းများကိုမြင်လျှင်၏အရပျ၌, သင်ဝန်းရံကိုယ့်ကိုယ်ကို "ဟုတ်ကဲ့, ကျနော်တို့လက်ျာဘက်ရွေးချယ်မှုစေပြီ" သင်ကဆိုသည်။
သိသာထင်ရှားသော Snow မျက်မှန်
ကျနော်တို့ဟိုတယ်ကိုရောက်တဲ့ကျနော်တို့သဘာဝကိုယျ့ကိုယျကို ယူ. , အဖြစ်ကျနော်တို့အခန်းတခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အိတ်ထားခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်နှင်းကျ၏မီတာနှင့်ဖုံးလွှမ်းနေသည်ပေမယ့်နေရာတိုင်း, ရာသီဥတုပူပြင်းခဲ့တယ်, ကျနော်အစ္စတန်ဘူလ်ကနေပြောနိုင်ပါသည်။ ငါ့ကိုပယ်နွေးအဝတ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကငါ့အဘို့ဤမျှလောက်ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားကိုကြည့်လာချင်ပါတယ်။ သင်သည်ထိုသူတို့စဉ်းစားကြပါလျှင်ရီသင့်ရဲ့ဘွတ်ဖိနပ်, ဦးထုပ်, လက်အိတ်, ပြီးသားယူ scarves အဲဒီမှာသွားလိမ့်မည်မဟုတ်။ သငျသညျသငျနှငျ့အတူ ယူ. နေဆဲအအေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မူရင်းရေစိုခံဆီးနှင်းဘောင်းဘီ, ကိုခံနိုင်ရည်တစ်ဦးရေဆန့်ကျင်ရှိတပ်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ သင်ပြုခဲ့လျှင်ဆောင်းရာသီအားကစားရာပိုအဆင်ပြေကောင်းစွာမူလစာမျက်နှာဒီတည်ဆောက်ခြင်းအချိန်ဖြုန်းနိုင်ပါ။ နှင့်သင်တန်း၏သင်နှင့်အတူတစ်လုံးဝဆီးနှင်းကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီးအဲဒီမှာဖြစ်ရမည်။ Uludag ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ တိုင်းအခိုက်အသင်၏မျက်စိဖွင့်လို့မရပါဘူးနှငျ့သငျအခွအေနေသွားပါလိမ့်မယ်ဆီးနှင်းသို့မဟုတ်လေတိုက်အားဖြင့်ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ပါတယ်။ လှုပ်ရှားမှုမှကျွန်တော်တို့ကိုပါစို့။ ၏သင်တန်းရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအားကစားပထမဦးဆုံးရှိပါတယ်။ သငျသညျ Uludag အတွက်လုပျနိုငျအားကစားလှုပ်ရှားမှုများတွင်နှင်းလျှောစီး, ရေခဲစကိတ်စီးခြင်းနှင့်စနိုးဘုတ်စီးခြင်း။ သငျသညျငါဆီးနှင်းအထွတ်အထိပ်အင်ဂျင်နှင့်အတူအားကစားလုပ်ပေးသည်ဟုဆိုပြန်လျှင်သင်ပိုမိုအနီးကပ်ထူးခြားတဲ့အလှတရားမှသက်သေခံနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့စနိုးဘုတ်စီးခြင်းကြိုးစားခဲ့သည်။ ကျနော်တို့£ 50 ရက်ပေါင်းမှာနှင်းလျောစီးငှား။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏လျှင်, ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့စနိုးဘုတ်စီးခြင်းကျိန်းသေ Uludag အတွေ့အကြုံရှိဆရာထံမှသင်ယူပါလိမ့်မယ်။ တစ်နာရီကိုသင်တန်းအမှတ်စဥ် 1 140 ။ (ကျောင်းသား) နှုန်းအတန်း၏ 1 10 နာရီလျှောမှ cable ကိုကားတစ်စီးရဲ့အဆုံးမှာကျနော်တို့ပြန် Uludag များ၏ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတစ်မူထူးခြားတဲ့အမြင်တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ငါတို့သည်ချော်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အခြိနျမှနျမှကတိုက်ရိုက်လွှပျော်စရာလည်းနည်းနည်းရေတံခွန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါတို့ကဲ့သို့အများအပြားအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောဝန်းကျင်ရှိခဲ့သည်။ သငျသညျ Be အလွန်သတိထားရလိမ့်မည်။ ယာဉ်မတော်တဆမှုတခါတရံပြင်းထန်သောအကျိုးဆက်များနှင်းလျှောစီးနေစဉ်အတွင်းကြုံတွေ့ခဲ့ကြနိုင်ပါတယ်လို့ပဲ။
အဆိုပါထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဖွင့်နှင်းလျှောစီးအဘို့အသွားကြပါဘူး။ နှစ်ဦးစလုံးအမြင်များသည့်ဖီး၏ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဆန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတကယ်လှပထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာတည်ရှိပါတယ်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ကြသည်။ ကြီးမားတဲ့မီးဖို, crispy မီးလောင်ရာရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ဝက်အူချောင်း-မုန့်အနေဖြင့်စားနပ်ရိက္ခာကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အရမ်းအရသာရှိတဲ့အကြံပြုလိမ့်မယ်။ Friendly and အထောက်အကူဖြစ်စေစားပွဲထိုးမေ့လျော့မကူညီနိုင်ပါ။ တက်ပူနွေးပြီးနောက်နှင့်ငါတို့ဝမ်းဖြည့်ပါကျနော်တို့ကမီးဖိုမှ cable ကိုကားဖြင့်နောက်တဖန်သွားလေ၏။ ဤအတောအတွင်းသင်တန်း၏, ကျနော်တို့တောင်တက်နှင့် Uludag လူတွေကိုသဘောကျတာသဘာဝဓာတျပုံပညာများများပြုမိပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဤမျှလောက်ညဥ့်ဘဝကိုဖို့အချိန်ဖြုန်းဖို့ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမကအခြားရွေးချယ်စရာလာသောအခါ, သင်ပျော်ရွှင်စွာထွက်ခွာနိုင်ရှိရာတော်တော်များများရာအရပျရှိပါတယျ။ သင်စာအုပ်ကိုဖတ်ချင်လျှင်, မီးဖိုဖြင့်သင့်ကော်ဖီမသောက်ရ, ဂီတနထေိုငျနားထောငျကွရှိမရှိ။ Uludag သင့်အိမ်ထောင်ဖက်, သင်၏သားသမီး, သင့်ကိုနှစ်သက်, သင့်မိသားစုနှင့်သင့်မိတ်ဆွေများကိုသင်ပျော်ရွှင်စွာပြန်လာနိုင်မည့်နေရာတစ်နေရာသွားပါ။ ငါကျနော်တို့ပြောနေသဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားသက်သာ "ကျနော်တို့တဖန်လာ" ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာခေါင်၏အရသာကို၌ဤသာယာသောပေမယ့်တိုတောင်းအားလပ်ရက်များတွင်နေ၏။ ငါတို့သည်ပြန်လာထွက်ထားကြ၏။ ပြန်လာတှငျကြှနျုပျတို့ကိုဆင်းသွားကြဖို့ cable ကိုကားရွေးချယ်။ cable ကိုကားတစ်စီးကသင်၏ဆိုက်ရောက်အပေါ် minibuses နှုန်းလူတစ်ဦးနှုန်း2မှာသွားအတူ။ လမ်းကဒီမှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 20 မိနစ်နှင့် Bursa'd ကြာပါသည်။ လမ်းကိုအလက်ဇန်းဒါး Bursa စားရန်မေ့လျော့မနေပါနဲ့။ ကျနော်တို့ပျောက် Bursa ၏မြို့အလယ်ဗဟိုကနေလက်ဇန်းဒါးİskenderoğluis 10 မိနစ်မှာစားရကြ၏။ ကျနော်တို့အလက်ဇန်းဒါးရှိမရှိဆုံးဖြတ်မီနှင့်သူတို့ဘာစားရကြ၏။ သူမအဖြစ်ကိုကောင်းစွာတံခါးနားမှာရှိခဲ့ဒါမှဒါအများကြီး။ ကျနော်တို့ 15 1 မိနစ်ကြောင့်မျှော်လင့်ထားပေမယ့်နာရီတန်းစီကြား၏။ အဆိုပါကွင်းသည်ကုန်သွယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့အတော်လေးခက်ခဲတဲ့ရောင်းချသူချပစ်လေ၏။ ငါသည်သင်တို့ကိုမြည်းစမ်းဖို့လိုပါတယ်, အရသာကိုဖော်ပြရန်လို့မရပါဘူး။ ကျနော်တို့ 60 နှုန်းလူနှစ်ဦးလဲလှယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစာအိမ်အစာကျွေး, ဒီမှာကျနော်တို့ကဂရန်းဗလီရန်အလွန်နီးကပ်သွား၏။ အများကြီးနဲ့တူကျနော်တို့ကြီးစွာသောဗလီ, ကျိန်းသေတန်ဖိုးရှိတစ်ဦးအလည်အပတ်၏နာမတော်ကိုအမှန်တကယ်ဗလီပြင်ပတွင်အသုံးပြုကြသည်။ ဗလီမှခရီးစဉ်ကိုအောက်ပါဟုယခုသွားကြဖို့အချိန်ကြီးကြှနျုပျတို့အားလပ်ရက်တနင်္ဂနွေရှိသည်ဘယ်မှာ Bursa 38 မတ်လဘတ်စ်ကားဘူတာနှင့်အစက်အပြောက်သွားဘတ်စ်ကားပေါ်ကို။
sdü'lကျောင်းသားများရဲ့အစမှာအဖြစ်Karlıyaylနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေခံစားနေကြ 25 / 02 / 2016 အဆိုပါKarlıyaylနှင်းလျှောစီးခံစားရဲ့အစမှာကဲ့သို့ပင်sdü'lကျောင်းသားများ: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်, ရေကန်ဆောင်းရာသီခရီးသွားလုပ်ငန်းရေးစင်တာအကြားမြင့်တက်လာတောငျကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်နေ့တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သောဖြန့်ဖြူးKarlıyaylပုံးပေါ် 26 ကီလိုမီတာအရှေ့တောင်ဘက်တွင် Egirdir နှင့် Davraz ဒေတာမှာတည်ရှိပါတယ်ခေတ်မီနှင့်အရည်အသွေးနှင့်အတူနိုင်ငံ၏ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ဗဟိုဖြစ်ပါတယ်။ ညျ့အဝရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလတွေ့ကြုံခံစားလိုသောသူများသည်ယင်း Davraz နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေအတူအကျိုးရှိအခွန်နှင့်အဆောက်အဦးများသိသိသာသာအခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်း, နှင်းလျှောစီးဖို့အခွင့်အလမ်းအိုင်ကြီးမြတ်အမြင်များနှင့်အတူ spinning ဖြစ်ပါတယ်င်း၏ဧည့်သည်များပေးထားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကို '' အကြောင်းအရာပရော်ဖက်ရှင်နယ် skiers နေချိန်မှာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆီးနှင်းရဲ့အရည်အသွေးနှင့်အတူအရင်ကဆိုရင် skiers များအတွက်ထိတွေ့၏သဘာဝအနူးညံ့မှုကိုလည်းနှင်းလျှောစီးရေးစင်တာနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလမ်းကြောင်း ...
ကလေးများဆုကြေးဇူးကို Izmir Ratings အဖွဲ့ခံစားနေကြ 22 / 01 / 2019 Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အိုလံပစ်ရေခဲပြင်အားကစားခန်းမ, ကျောင်းပိတ်ဖို့ရန်အခွင့်အလမ်းကိုယူတဲ့သူသူငယ်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြိုဆိုသည်။ အဆိုပါ Carnet ကိုခြေရာခံနိုင်သည့်အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ရေခဲပေါ်နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်မှာသူတို့နှင့်အတူလျှံတစ်ခုလုံးခေတ်၏စိတ်ဖိစီးမှုသည်။ မြို့တော်ခန်းမပေးသော Bornova Asik Veysel အပန်းဖြေဧရိယာအတွက် Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အိုလံပစ်ရေခဲပြင်အားကစား, အဆိုပါစာသင်ချိုးဝင်ကလေးတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကြိုဆိုသည်။ စတိုင်အတွက်အားလပ်ရက်ခံစားဧရိယာထဲမှာဖြူဖပ်ဖြူရောရေခဲကိတ်ကွင်းနှင့်အတူ ratings လူငယ်။ ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်အတူအားလုံးစိန်ခေါ်မှုများကျော်လွှားနေချိန်တွင်ရေခဲပေါ်ချော်နေပေမဲ့တချို့ကပထမဦးဆုံးအကြိမ်, အခြားသူများလေယာဉ်ပြေးလမ်းပေါ်ခြေလှမ်းဆုံးရှုံးမှုပစ်ကျရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါဘေးတွင်လျှက်မှမည်သို့ပင်ရလဒ်, ငါတို့ရှိသမျှသည်အစီရင်ခံစာ ... ..
Erciyes ကရေတွက်အောင်ပျော်စရာရှိသည် 05 / 02 / 2012 မိုးသည်းထန်စွာနှင်းအသစ်တည်ဆောက်ထားလေယာဉ်ပြေးလမ်းအတွက်တောင်ကို Erciyes အပေါ်နှင်းလျှောစီးပျော်မွေ့ခဲ့ပြီးနောက် Kayseri တစ်နေသာတနင်္ဂနွေရက်တွင်လေကြောင်းဖြတ်သန်းရတယ်။ လေထုအပူချိန် Erciyes နှင်းလျှောစီးရေးစင်တာ၌အတိုးနှင့် တွဲဖက်. အသစ် built လမ်းကြောင်းပိတ်သောကျောက်သက်တမ်းကုန်သွားပြီဖြစ်ခဲ့သည်။ Erciyes နှင်းလျှောစီးနိူးစွတ်ဖါးကလေးတွေအများအပြားနိုင်ငံသားများနှင့်အတူ glides ဆွဲထုတ်သစ်ကိုလေယာဉ်ပြေးလမ်း၏အရသာကိုကြပါတယ်။ Erciyes တောင် Master Plan ကို Kayseri မြို့တော်ဝန် Mehmet Özhasekiကြည့်ရှုဆောက်လုပ်ရေးကာလအတွင်းသူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာတိုက်ပွဲ၏အသီးအပွလက်ခံရရှိကဆိုသည်။ Özhasekiလုပ်နေတာအကြောင်းကိုတူရကီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းက "စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းလုံးတောင် 12 လအတွင်းတစ်လျှောက်လုံးအသုံးပြုသွားမည်နိုင်မယ့်စီမံချက်၏စစ်ဆင်ရေး ...
သူတို့ကဧပြီလနှင်းလျှောစီးခံစားကြည့်ပါရေတွက်ပါကအသကျရှငျ 06 / 04 / 2015 သူတို့ကဧပြီလအတွက်တစ်လအပေါ်ရှငျနထေိုငျနှင်းလျှောစီးပေါ်မှာရေတွက်ပါကခံစားကြည့်ပါ: လေထုအပူချိန် skis ချစ်သူများနှင့်အပန်းဖြေဧပြီလ Erciyes နှင်းလျှောစီးရေးစင်တာအတွက်ပြောင်းကုန်ပြီပျော်မွေ့ဆွဲထုတ်ရောက်ရှိဘယ်မှာ Kayseri အတွက် 16 ဒီဂရီ။ လေထုအပူချိန် skis ရောက်ရှိဘယ်မှာ Kayseri အတွက် 16 ဒီဂရီချစ်သူများဆွဲခြင်းနှင့်အပန်းဖြေဧပြီလ Erciyes နှင်းလျှောစီးရေးစင်တာအတွက်ပြောင်းကုန်ပြီပျော်မွေ့။ တနင်္ဂနွေ 16 ဒီဂရီလေထုအပူချိန်နှင့်နိုင်ငံသားများ သိ. အခွင့်အလမ်း, အ Erciyes နှင်းလျှောစီးရေးစင်တာကြပါတယ်။ ၎င်း၏အမှုန့်ဆီးနှင်းဘို့အကျော်ကြားသည့် Erciyes အတွက်ပြောင်းကုန်ပြီနှင့်အတူသူတို့လေးရယ်မှဆွဲထုတ်ခြင်းနှင့်ဧပြီလအတွက်စလစ်ပျော်မွေ့နေချိန်မှာ, ၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့်အတူ sledding မှ။ Hasan Senturk ၏မိသားစုမှ Erciyes နှင်းလျှောစီး Center ကလေးတွေယနေ့ဆီးနှင်းနှင့်အတူဖြည့်ဆည်းဖို့ ", တို့နှင့်အတူကြွ ...
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသူရဲကောင်း: ကျနော်တို့ Erkan တောင်တန်းနှင်းလျှောစီးရေးစင်တာကိုခံစားရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ် 05 / 02 / 2015 အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသူရဲကောင်း: ကျနော်တို့ Erkan တောင်တန်းနှင်းလျှောစီးရေးစင်တာကိုခံစားရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်: ခရီးစဉ် Erkan တောင်တန်းနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးSüleymanသူရဲကောင်းအပေါ်မှတ်ချက်များအတွက်, "Erkan တောင်တန်း, တူရကီရဲ့ဦးဆောင်နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း၏တနှင်းလျှောစီးစင်တာတစ်ခုပြင်းထန်သောအကျိုးစီးပွားများမကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်အကျိုးစီးပွားအတွက်ပြီးနောက်လည်းရှိခဲ့သည်။ ။ ယခုတွင်ငါသည်လည်းနှင်းလျှောစီးအဘို့အဆောက်အဦးနဲ့တူအမျိုးမျိုး၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးထက်ပိုသောပြင်းထန်သောအတိုးကယုံကြည်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ချစ်သူများနှင်းလျှောစီးကိုခံစားရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်နှင်းလျှောစီး, "Erkan တောင်တန်းနှင်းလျှောစီးရေးစင်တာကဆိုပါတယ် Erzincan အုပ်ချုပ်ရေးမှူးSüleymanသူရဲကောင်းများလည်ပတ်ခဲ့သူကား, အားလုံးနှင်းလျှောစီးချစ်သူများ Erkan တောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟုပြောသည်။ အတိတ်ကာလ Erkan အရပ်ရပ်တို့၌ကွဲပြားရက်ကြာခရီးစဉ် ...
အိမ်ရာစျေးနှုန်းများအတွက် Havaray Tuzla အဆိုပါယာဉ်အသွားအလာများပြားစေမည်ဟုမိန့်သက်သာပါလိမ့်မယ်
ကလေးများဆုကြေးဇူးကို Izmir Ratings အဖွဲ့ခံစားနေကြ
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသူရဲကောင်း: ကျနော်တို့ Erkan တောင်တန်းနှင်းလျှောစီးရေးစင်တာကိုခံစားရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်
အဆိုပါနှင်းလျှောစီး skiers ခံစားရန်ထိုကဲ့သို့သောŞalvarlıခဲ့
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: TOPRAKKALE GAR2။ AND3။ ပြုပြင်မွမ်းမံ PERONA လမ်းအကြားရှိဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: TCDD MALTEPE, ERENKÖY, SUADİYE, BOSTANCI, ဘူတာရုံKÜÇÜKYALIအောင် ALTER
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီသို့ရောက်ရှိတိုက်ကြီးအပေါ်550 တိုင်းပြည်: SARKUYSAN